तेह्रौं सागको पहिलो दिन नेपाललाई १५ स्वर्ण, कुल पदक २३ - Internet Khabar
Home Sports तेह्रौं सागको पहिलो दिन नेपाललाई १५ स्वर्ण, कुल पदक २३
काठमाडौं, मङ्सिर १६ गते । नेपालले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)को पहिलो दिन १५ स्वर्ण जितेको छ । सागको औपचारिक उद्घाटन भएको भोलीपल्ट १२ विधाको खेल भएकोमा नेपालले कराँते र तेक्वान्दोबाट मात्र १४ स्वर्ण जितेको छ ।
सातदोबाटोस्थित खेलकुद परिसरमा सम्पन्न कराँते र तेक्वान्दो गरी दुई विधामा नेपालले सामान सात सात स्वर्ण पद जित्यो । त्यसैगरी, पोखरामा सम्पन्न ट्रायथलनबाट एक गरी नेपालले पहिलो दिन १५ स्वर्ण हात पारेको हो ।
करातेको एकल कातातर्फ मण्डेकाजी श्रेष्ठले पाकिस्तानका नियमतुल्लाहलाई पराजित गरी स्वर्ण पदक जित्नुभयो । श्रेष्ठले २६.७२ अङ्क प्राप्त गर्दा पाकिस्तानी खेलाडी नियमतुल्लाहले २४.९२ अङ्क पाउनुभयो । उहाँले पुरुष एकल काता तर्फ जित्नुभएको स्वर्ण नै नेपालको लागि तेह्रौं सागमा पहिलो स्वर्ण पदक बन्न पुग्यो ।
तर तेह्रौं सागको पहिलो स्वर्ण भने पाकिस्तानका खेलाडी साहिदाले हात पार्नुभयो । उहाँले कराँतेको व्यक्तिगत् कातामा नेपालकी चञ्चला दनुवारलाई पराजित गर्नुभयो । चञ्चलाले भने पहिलो रजत दिलाएर तेह्रौं सागमा नेपाललाई पहिलो पदक दिलाउनुभयो ।
कराँते टिम काता पुरुष समूहबाट मण्डेकाजी श्रेष्ठ, महसुस तामाङ र प्रवीण मानन्धर र महिला समूह काता तर्फ निर्मला तामाङ, संगिता मगर र सरु कार्कीले स्वर्ण पदक दिलाउनुभयो । कराँते तौल समूह तर्फ नेपालले चार स्वर्ण जित्यो । कराँते ५५ किलो तौल समूह लक्ष्मण तामाङले स्वर्ण जित्नुभयो । ८४ किलो माथिको विधामा विप्लवलाल श्रेष्ठ, ४५ किलो मुनिमा कुसुम खड्का र ५० किलो मुनि विधामा अनु अधिकारीले स्वर्ण जित्नुभयो ।
तेक्वान्दो पुम्से अन्तगर्त २३–२९ वर्ष उमेर समूहमा कमल श्रेष्ठ, १७–२३ वर्ष उमेर समूहमा सिना मादेन लिम्बु, २३–२९ वर्ष समूहमा पार्वती गुरुङ र २९ वर्षमाथिको उमेर समूहबाट आयशा शाक्यले एक एक गरी चार स्वर्ण जित्नुभयो ।
तेक्वान्दो पुम्से अन्तगर्त २९ वर्षमाथिको संयुक्त समूहमा आयशा शाक्य र सञ्जिवकुमार पाण्डे, महिला समूहमा १७–२३ वर्ष उमेर समूहमा निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङ र सञ्जिला तिमिल्सिनाले र २३–२९ वर्ष उमेर समूहतर्फ निता गुरुङ, प्रशंसा क्षेत्री र सुसिला राईले स्वर्ण पदक जित्नुभयो ।
पोखराको लेकसाइडमा सम्पन्न ट्रायथलनमा सोनी गुरुङले स्वर्ण पदक दिलाउनुभयो ।-गोरखापत्र अनलाइन
Previous articleके हो चन्द्र ग्रहण ? कस्तो हुन्छ ग्रहणको प्रभाव ? जानी राखे राम्रो
Next articleएक कैदीले गरे प्रमका लागि मृर्गौला दान गर्ने घोषणा